အစားအစာနှင့်အစားအစာ - Vondt.net
သင်၏ကျန်းမာရေးအပေါ်အစားအသောက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုစိတ်ဝင်စားပါသလား။ ဤတွင်အစားအစာအမျိုးအစားနှင့်အစားအစာအမျိုးအစားမှဆောင်းပါးများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ အစားအစာနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်သာမန်ချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုသောပါဝင်ပစ္စည်းများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သဘာဝအပင်များ၊ အဖျော်ယမကာများနှင့်အခြားဟင်းလျာများပါဝင်သည်။
10 / 08 / 2016 /0 မှတ်ချက်/i အစားအစာနှင့်အစားအစာ, အရည်အသွေးအဆောင်းပါးများ/av ရေတံခွန်
American Thoracic Society မှသုတေသနဂျာနယ်တွင်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရမှန်ကန်သောအစာစားခြင်းသည်အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည့်အဆုတ်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်ဟုပြခဲ့သည်။ သုတေသီများမှလေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရအမျှင်ဓာတ်မြင့်မားခြင်းဖြင့်အဆုတ်ရောဂါဖြစ်ပွားနိုင်ခြေကိုလျော့နည်းစေကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဆုတ်ရောဂါများသည်နော်ဝေတွင်သာမကကမ္ဘာအနှံ့တွင်အဓိကပြproblemနာဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ COPD သည်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသေဆုံးမှု၏တတိယအကြီးဆုံးသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်သည်သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များအပါအ ၀ င်အမျှင်ဓာတ်များစွာစားသုံးခြင်းဖြင့်အဆုတ်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေကိုလျှော့ချနိုင်လျှင်သင်ကိုယ်တိုင်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်နှင့်၎င်းကိုလုပ်ဆောင်ရန်အကောင်းဆုံးကြိုးစားသင့်သည်။
၁၉၂၁ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများသည်လေ့လာမှုတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့ပြီးအဓိကအားဖြင့်အသက် ၄၀ မှ ၇၀ အတွင်းဖြစ်သည်။ လေ့လာမှုမတိုင်မှီလူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေ၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ ကိုယ်အလေးချိန်နှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေစသည်တို့ကွဲပြားသောအချက်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့သည်။ အချက်အလက်ကောက်ယူပြီးနောက်ဖိုင်ဘာစားသုံးမှုအရသင်တန်းသားများကိုအထက်နှင့်အောက်အုပ်စုများသို့ခွဲဝေသည်။ အထက်အုပ်စုသည် ၁၀.၇၅ ဂရမ်သာစားသောအနိမ့်အုပ်စုနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်နေ့ပျမ်းမျှအမျှင် ၁၇.၅ ဂရမ်ကိုစားသုံးခဲ့သည်။ ရလဒ်များကိုအမျိုးမျိုးသောအချက်များအရညှိနှိုင်းပြီးနောက်၌ပင်ပိုမိုမြင့်မားသောဖိုင်ဘာပါဝင်မှုရှိသောအုပ်စုသည်အဆုတ်ကျန်းမာရေးကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ မင်း input ရှိလား အောက်ကထင်မြင်ချက်ကိုဖြည့်ပါ Facebook ကစာမျက်နှာ.
တစ်နေ့လျှင်အမျှင်ဓာတ် ၁၇.၅ ဂရမ်ပါသောအထက်အုပ်စုတွင် ၆၈.၃% တွင်ပုံမှန်အဆုတ်၏လုပ်ဆောင်မှုရှိသည်ဟုမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။ အနိမ့်ဖိုင်ဘာစားသုံးမှုနှင့်အတူအနိမ့်အုပ်စုတွင်, 17.5% ပုံမှန်အဆုတ် function ကိုခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ - ရှင်းရှင်းလင်းလင်းခြားနားချက်။ အုပ်စုတွင်ဖိုင်ဘာပါ ၀ င်မှုနိမ့်ကျခြင်းနှင့်အတူအုပ်စုတွင်အဆုတ်ကန့်သတ်ခြင်းဖြစ်ပွားမှုမှာသိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားသည်။ အခြားအုပ်စုတွင် ၁၄.၈% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၂၉.၈% ရှိသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ သစ်သီးများနှင့်အမျှင်ဓာတ်မြင့်မားစွာပါဝင်သောအခြားဒြပ်စင်များပါ ၀ င်သောအစားအစာအမျိုးမျိုးကိုစားရန်ကြိုးစားပါ။
လေ့လာမှုက ၁၀၀% သေချာသည်နှင့်အမျှင်သည်အဆုတ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်အကြောင်းအရင်းမဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ဖိုင်ဘာ၏ရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောဂုဏ်သတ္တိနှင့်ဆက်စပ်သည်ဟုသူတို့ယုံကြည်ကြသည်။ အမျှင်ဓာတ်သည်အူသိမ်အပင်၏တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြုသောကြောင့်၎င်းသည်ရောဂါအားလုံးအားခုခံအားစနစ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ ရောင်ခြင်းသည်အဆုတ်ရောဂါအများစု၏ရင်းမြစ်ဖြစ်သဖြင့်ဤရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုကိုယေဘုယျကျဆင်းခြင်းသည်အဆုတ်ကျန်းမာရေးအပေါ်တိုက်ရိုက်အပြုသဘောသက်ရောက်နိုင်သည်။ အစားအစာတွင်အမျှင်ဓာတ်ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိသည် CRP (C-reactive protein) ပါ ၀ င်သောအကြောင်းအရာသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုးပွားစေသောတွန်းအားဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် 'အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများစားပါ' ဤဆောင်းပါး၏နိဂုံး။ သုတေသီများကယုံကြည်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်အဆုတ်ရောဂါများကိုအဓိကကုသသည့်ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဝါးများကိုလျစ်လျူရှုထားသင့်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအာဟာရဆိုင်ရာဗဟုသုတနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ရေးကိုအာရုံစိုက်သင့်သည်။ ကျန်းမာသောအစားအစာကိုလေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်နေ့စဉ်အသက်တာတွင်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်သင့်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုလုံးကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုရင်၊ ဆောင်းပါးရဲ့အောက်ခြေမှာ link တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါးအားလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၊ မိတ်ဆွေများနှင့်အသိအကျွမ်းများနှင့်ဝေမျှရန်အခမဲ့။ ထပ်ဆောင်းထပ်ခါတလဲလဲပါတဲ့စာရွက်စာတမ်းတစ်ခုအနေဖြင့်ပို့ထားသည့်ဆောင်းပါးများ၊ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်တူသောအရာများကိုသင်လိုချင်ပါကကျွန်ုပ်တို့အားကျွန်ုပ်တို့တောင်းဆိုပါသည် ကဲ့သို့ နှင့် Facebook စာမျက်နှာ get မှတဆင့်အဆက်အသွယ်ရ ဒီမှာ။ အကယ်၍ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါက၊ ဆောင်းပါးတွင်တိုက်ရိုက်မှတ်ချက်ပေးပါ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ (လုံးဝအခမဲ့) - မင်းကိုကူညီဖို့ငါတို့အကောင်းဆုံးကြိုးစားမယ်။
လူကြိုက်များတဲ့အပိုဒ်: - အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါကုသမှုသည်မှတ်ဉာဏ်အပြည့်ကိုပြန်လည်ရရှိစေသည်။
ဒီနည်းကိုစမ်းကြည့်ပါ - - Sciatica နှင့် False Sciatica ဆန့်ကျင်သောလေ့ကျင့်ခန်း ၆
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: - ဒူးနာခြင်းအတွက်ထိရောက်သောစွမ်းအင်လေ့ကျင့်ခန်း ၆ ခု
မင်းသိလား - အအေးမိခြင်းဖြင့်အဆစ်နှင့်ကြွက်သားများနာကျင်မှုကိုသက်သာစေနိုင်သလား။ အခြားအမှုအရာတို့ကိုအနက် ဇီဝကမ္မဗေဒ အဓိကအားဖြင့်သဘာဝထုတ်ကုန်များဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့် (သင်ဒီမှာမှာယူနိုင်သည်) သည်လူကြိုက်များသောထုတ်ကုန်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသို့မဟုတ်အကြံပြုချက်များလိုအပ်ပါက။
- သင်ပိုမိုသိရှိလိုပါကသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါသလား ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အချင်းပြည့်ဝသောကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူကိုကျွန်ုပ်တို့မှတစ်ဆင့်အခမဲ့ (အခမဲ့) မေးမြန်းပါ Facebook ကစာမျက်နှာ ဒါမှမဟုတ်ငါတို့ကတဆင့်မေး - အဖြေကိုရ!"ကော်လံ
VONDT.net - သူငယ်ချင်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုကြိုက်နှစ်သက်စေရန်ဖိတ်ပါ။
ငါတို့တ ဦး တည်းရှိတယ် အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု ကြွက်သားကြွက်သားကျန်းမာရေးပြaboutနာများနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏မေးခွန်းများကို Ola နှင့် Kari Nordmann ဖြေဆိုနိုင်သည့်နေရာဖြစ်သည်။
- ကျေးဇူးပြုပြီး Vondt.net ကိုလိုက်နာပါ YOUTUBE
(သင်၏ပြexactlyနာများအတွက်တိကျသောလေ့ကျင့်ခန်းများသို့မဟုတ်အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်များဖြင့်ဗီဒီယိုပြုလုပ်လိုပါက) လိုက်နာပါ။ မှတ်ချက်ပေးပါ။
- ကျေးဇူးပြုပြီး Vondt.net ကိုလိုက်နာပါ FaceBook
(ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၄ နာရီအတွင်းမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်မေးခွန်းများအားလုံးကိုတုံ့ပြန်ရန်ကြိုးပမ်းသည်။ သင် chiropractor၊ တိရိစ္ဆာန် chiropractor၊ ရူပကုထုံး၊ ကုသမှု၊ ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သူနာပြုမှဆက်လက်ပညာသင်ကြားနေသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံးပညာရှင်ထံမှအဖြေများသင်ရွေးချယ်လိုသည်) သင်ရွေးချယ်သည်။ သင်၏ပြproblemနာနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်ခြင်း၊ အကြံဥာဏ်ပေးသည့်ကုထုံးများကိုရှာဖွေရန်၊ MRI အဖြေများနှင့်အလားတူပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သည်။
ဓာတ်ပုံများ - Wikimedia Commons 2.0၊ Creative Commons, Freemedicalphotos, Freestockphotos နှင့်စာဖတ်သူများ၏ပံ့ပိုးမှုများ။
NHANES ရှိအစားအသောက်ဖိုင်ဘာစားသုံးမှုနှင့်အဆုတ်လုပ်ဆောင်မှုအကြားဆက်နွယ်မှု၊ Corrine Hanson et al ။ , အမေရိကန် Thoracic Society ၏ရာဇဝင်, Doi: စိတ္တဇအွန်လိုင်းဇန်နဝါရီလ 10.1513, 201509, ထုတ်ဝေ 609 / AnnalsATS.19-2016OC, ။
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Lunger.jpg?media=1648573622 435 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2016-08-10 20:25:092022-03-18 17:27:23- ကျန်းမာသောအဆုတ်အတွက်မည်သို့စားရမည်နည်း။
02 / 08 / 2016 /0 မှတ်ချက်/i အစားအစာနှင့်အစားအစာ, အရည်အသွေးအဆောင်းပါးများ/av ရေတံခွန်
သုတေသနဂျာနယ် Arthritis & Rheumatism တွင်ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှုတစ်ခုအရချယ်ရီသီးစားခြင်းသည်အခြားအရာများမှဂေါက်ရောဂါကိုများစွာကုသနိုင်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ချယ်ရီသီးများကို ၂ ရက်မျှစားသုံးခြင်း (!) ယခုနှစ်အတွင်းတွင်ဂေါက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကို ၃၅% လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
ဂေါက် အဆစ်အမြစ်တွယ်မှုအများဆုံးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် - ဤဂေါက်ရောဂါသည်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိယူရစ်အက်စစ်များလွန်းခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိယူရစ်အက်ဆစ်ဖြစ်ပွားမှုများလာခြင်းသည်အဆစ်များတွင်အများအားဖြင့်ယူရစ်အက်စစ်ဓာတ်များဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အရေပြားအောက်ရှိအဖုများနှင့်တူသော Uric acid တည်ဆောက်မှု (tophi ဟုခေါ်သည်) ။
များသောအားဖြင့်သဘာဝဖြည့်စွက်ဆေးများသည်အဖြူရောင်ဆေးလုံးများနှင့်ဆေးများကဲ့သို့ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမရှိဘဲလုပ်နိုင်သည်။ ဒီလေ့လာမှုကချယ်ရီသီးဟာ antioxidants ပါဝင်မှုမြင့်မားခြင်းနှင့်သဘာဝကရောင်ရမ်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကြောင့်ဂေါက်အပါအဝင် - ဂေါက်ပုံစံများကိုကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ have မှပါဝင်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်သူများသည် ၁ နှစ်ကျော်ကြာခဲ့သည်
လေ့လာမှုတစ်ခုသည်ပြက္ခဒိန်တစ်နှစ်လုံးတွင်ပါဝင်သူ ၆၃၃ ဦး ကိုလေ့လာခဲ့သည်။ ၎င်းတို့သည်ရောဂါလက္ခဏာများ၊ ဖြစ်ပွားမှု၊ အန္တရာယ်အချက်များ၊ ဆေးဝါးများနှင့်သဘာဝအလုံအလောက်ရှိခြင်း၊ ချယ်ရီသီးများစားခြင်းကဲ့သို့သောအချက်များအပေါ်တွင် လိုက်၍ (သဘာဝနှင့်ထုတ်ယူမှုနှိုင်းယှဉ်မှု) နှင့်မည်မျှကြာသည်စသည့်အချက်များအပေါ်တွင်ဆက်လက်လေ့လာခဲ့သည်။ သုတေသီများကချယ်ရီသီးတစ်ခွက်ကိုတစ်ခွက်ထက်ဝက်သို့မဟုတ် ၁၀-၁၂ ချယ်ရီသီးဟုသတ်မှတ်သည်။
ချယ်ရီစားသုံးမှု = ဂေါက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ခြေနည်းသည်
တစ်နှစ်အကြာတွင်အုပ်စုကိုလိုက်လံလေ့လာသည့်အခါကိန်းဂဏန်းများအရချယ်ရီသီးများကိုတစ်နှစ်တွင် ၂ ကြိမ်မျှသာစားသုံးသူများသည်ပြန်လည်သက်သာခြင်းနှင့်ဂေါက်ရောဂါကို ၃၅% လျော့နည်းစေသည်။ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှချောကလက်ကြီးများစားသုံးခြင်းသည်လည်းဂေါက်ရောဂါလျော့ကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ကိုသဘာဝကျကျတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ချယ်ရီစားသုံးမှုကို allopurinol (ယူရစ်အက်စစ်ပါဝင်မှုကိုကျဆင်းစေသည့်ဆေး) နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါဂေါက်ရောဂါများတွင် ၇၅% အထိလျော့ကျသွားသည်။
ဂေါက်ရောဂါခံစားနေရသူများအတွက်အစားအစာသည်အရေးကြီးသည်။ အဆစ်နာရောဂါရှိသူများသည်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်သောအစားအစာများစားသုံးခြင်းကိုအာရုံစိုက်သင့်ပြီး antioxidants များသောအစားအစာများကိုစားသုံးသင့်သည်။ ဂေါက်ရောဂါရှိသူများအတွက်ချယ်ရီသီးများဘာလုပ်နိုင်သည်ကိုသေချာစေရန်ပိုမိုကျပန်းကျပန်းစမ်းသပ်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်နေပါသည်၊ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောပုံရိပ်ဖြစ်သည်ဟုဆိုရပေမည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: -6Sciatica ဆန့်ကျင်လေ့ကျင့်ခန်း
Zhang et al, ချယ်ရီစားသုံးမှုနှင့်ထပ်တလဲလဲဂေါက်တိုက်ခိုက်မှုအန္တရာယ်
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Kirsebær.jpg?media=1648573622 466 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2016-08-02 14:39:152022-03-18 17:26:58ချယ်ရီသည်ဂေါက်၏အခွင့်အလမ်းကိုလျှော့ချပေးသည်
1 ၏စာမျက်နှာ 16123>»